လူတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပန်းတိုင်များ, အစီအစဉ်များ, အိပ်မက်ရှိပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီသည်သူ၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဖို့ကြိုးစားပါတယ်ကြောင့်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိ၏။ သင့်လျော်သောအလိုဆန္ဒများကိုသူတို့မျှော်မှန်းချက်မှပိုမိုနီးကပ်စွာ get ကူညီပေးပါမည် map ။ လူအတော်များများဟာသင့်ကိုယ်ပိုင်ထုံးစံအပြီးကြောင်းဆိုကြသည် ကတ်များဆန္ဒရှိသော်လည်း ၎င်းတို့၏အိပ်မက်များစစ်မှန်တဲ့လာ။ ဒါဟာဠာ၏တပ်မက်လိုချင်သောအသတင်းစကားများနှင့်ကဒ်အစစ်အမှန်လောကရှိရောင်ပြန်ဟပ်ခံရဖို့စတင်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစွမ်းအင်အထွက်နှုန်းနှင့် တွဲဖက်. မှန်ကန်စွာဖော်ပြထားကြောင်းဆန္ဒထုတ်ပြန်သွားလေ၏။ တကယ်တော့, မြေပုံတစ်ဦးဆန္ဒစေရန်တစ်ဦးအမြင်အာရုံ display ကိုဖြစ်ပါတယ်။
အလိုဆန္ဒများ map ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အလိုဆန္ဒ၏မြေပုံအောင်ဘယ်လိုနားလည်စေရန်, လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးသင်အိပ်မက်မက်ဝံ့မဖွစျနိုငျကွောငျးကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အသက်တာ၏မြေတပြင်လုံး၏အိပ်မက် built-in ခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏ရည်ရွယ်ချက်သာရပါမည်ပစ္စုပ္ပန်, ဒါပေမယ့်လည်းခံစားရသည်။ ထို့ကွောငျ့အလိုဆန္ဒများများ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက်ကူညီပေးသည်ပေးသောအတွေး၏တန်ခိုး, စတင်သည်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့သေဒဏ်စီရင်တာရှည်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောဝမ်းမြောက်သောစိတ်ကိုငါမရောက်စေ, မြေပုံအခြားလူရဲ့အလိုဆန္ဒများပေါ်တွင်ဖော်ပြရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ အတော်များများကလူသိများတဲ့နှင့်ကျော်ကြားသောလူမျိုးသည်အလိုဆန္ဒနှင့်ရလဒ်အဖြစ်မြေပုံသူတို့နေသောဖြစ်လာကြပါပြီစေ။ အိပ်မက်များသူတို့ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာတောက်ပနှင့်ရောင်စုံ Display ကိုဖြစ်နိုင်သည်ကိုထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်သတ်မှတ်ထားသောခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တစ်ဦး Wish ကဒ်ဆို format နဲ့နိုင်ပါတယ်လုပ်ပါ။ အဆိုပါစံပြအရွယ်အစား A3 ဖြစ်ပါတယ်။ စာရွက်ကိုးတန်းတူအစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြားရပါမည်။ Feng Shui ၏အခြေခံမူကိုးပထဝီဒေသများ၏တစ်ဦးချင်းစီကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အရေးပါသောအရှုထောင့်တစ်ဦးမှကိုက်ညီကြောင်းဖော်ပြသည်။
ကဒ်၏ဗဟိုကျန်းမာရေးကြလိမ့်မည်။ အဲဒီမှာသင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပျော်ရွှင်မှုကို, အပြုံးဖေါ်ပြခြင်းပူးတွဲရမည်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံကော်သာသင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းကိုကောင်းသောခံစားရရှိရာတစျခုဖွစျနိုငျပါတယျ။ ကျန်းမာရေးပြီးနောက်အပေါငျးတို့သညျအခွားရင်ပြင်ထဲမှာဖြည့်ဖို့စက်ဝိုင်းထဲမှာရှိနိုင်ပါသည်။ ဆဲလ်ကျော်ကြားမှု၏ထိပ်ပေါ်မှာနေရာချစရပါမည်။ ထို့နောက်ဥစ္စာဓန, မိသားစုအသိပညာ, နေရာတန်ပြန်လက်ယာရစ်ရွေ့လျား အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း , ခရီးသွား, ကလေးများ, နှင့်ချစ်ခြင်း။ အဆိုပါ sequence ကိုကဏ္ဍများတွင်လေ့လာတွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။
ရွေးချယ်ထားသောရုပ်ပုံများကိုဖော်ပြဂရုတစိုက်တစ်ခုချင်းစီကိုစကားလုံးကိုရွေးပါနှင့်အသေးစိတ်သတ်မှတ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ "ကျန်းမာရေး" ၏ကဏ္ဍအတွက်စာတန်းနှင့်အတူလှပသောခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့်ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါသည် "ကျွန်မပါးလွှာတယ်, ငါအလေးချိန် - 55 ကီလို။ " သငျသညျနှိုကျမကောငျးသောအရာ, "ပါးလွှာ" ဟူသောစကားလုံးကိုရေးနှင့်သူတို့ "ဘေးဥပဒ်" ၏အမြစ်ဆံ့အဖြစ်, "ကိုယ်အလေးချိန်" လို့မရပါဘူး။
ကဏ္ဍက "ဥစ္စာဓန" ဟုမှတ်ချက်တစ်ခုအထင်ကြီးမျက်နှာတန်ဖိုးပုံဖြင့်ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါသည်။ "ငါ့ဘဏ်အကောင့်တွင် 1000000 $": အောက်ပါအတိုင်းကဲ့သို့သောပုံရိပ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်ဝင်ရောက်ပါ။
Square ကို "အလုပ်ရှာဖွေရေး" ဟုသာယာဝပြောတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဆွဲသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ပေါ်မှာရေးထား: "ငါကုမ္ပဏီ N ကို၏ဦးခေါင်းကိုဖြစ်၏, ငါ့လစာ ... , ငါ့တာဝန်များကို၏စက်ဝိုင်းပေးဆောင် ... "
"မိသားစု" ၏ကဏ္ဍတွင်သင်တစ်ဦးသည်မင်္ဂလာများနှင့်လည်းရွှင်လန်းအခိုက်၌သင်တို့၏မိသားစုဓာတ်ပုံကိုထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်သင်ပုံစံမျိုးရယူထားတဲ့ရန်စံပြမိသားစု၏ပုံရိပ်ကိုရွေးပါ။
ထိုအခါစတုရန်းအတွက် "အိမ်ထောင်ရေး" ဟုရုပ်ပုံလွှာဟာသာယာဝပြောတဲ့မိသားစုဆက်ဆံရေးကိုကိုယ်စားပြုသောဖြစ်သင့်သည်။ မိမိအအိမ်ထောင်ဖက်ဖော်ပြ "သစ္စာရှိမှု", "ချစ်ခြင်းမေတ္တာ", "နားလည်မှု" နှင့် "ထောက်ခံကြောင်း" ကဲ့သို့စကားလုံးများကိုသုံးစွဲဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
သငျသညျပျော်စရာများနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုနယ်ပယ်နှင့်အတူအလိုဆန္ဒများကဒ်အတွက်ပြဿနာကိုချဉ်းကပ်လျှင်, ရလဒ်ပင်ပိုမိုထိရောက်ပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာအတိအကျမှတ်မိဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ သင်တစ်ဦးအဖြူကားတစ်စီး၏အထူးအမှတ်တံဆိပ်ချင်လျှင်, တစ်ရုံထိုကဲ့သို့သောကားတစ်စီး၏ဓာတ်ပုံနှင့်အမြဲအဖြူရ။ မှတ်ပုံတင်ကဒ်စဉ်အတွင်းကြောင့်အလိုဆန္ဒမပြည့်စုံခဲ့ပြီး, သင်မြေပုံကိုအလိုဆန္ဒများပေါ်တွင်ပြသသောသူအပေါင်းတို့သည်ရှိကိုယ်စားပြုသငျ့သညျ။
Visualization အလိုရှိ - မြင်ယောင်ဖို့ဘယ်လို?
တံခါးပေါက် Art Deco
ဒိန်ခဲနှင့်အတူကြက်သားလွှာ - ဟင်းလျာများအမျိုးမျိုးချက်ပြုတ်၏မူလစိတ်ကူး
Papillomas ၏ဖယ်ရှားရေး -7အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ
တစ်ဖြတ်အတူဝတ်စားဆင်ယင် - တိုင်းအရသာအဘို့အအလှဆုံးဆင်မြန်း 24 ဓါတ်ပုံ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Dance နေ့
Gwen Stefanie စကင့်များ၏ဆင်တူနယူးဆံပင်
အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌အနီရောင် Currant နှင့်အတူသခွားသီး - ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးကိုအကောင်းဆုံးသခင်ထံမှချက်ပြုတ်နည်းများ
အီဗာ Longoria မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်များ၏ကလေးများရှိသည်ဖို့လိုလား
သဘာဝတွင်ဓာတ်ပုံ "သီချင်း Love Story"